Husiku Hwakaenzana - Wikipedia
(Redirected from Husiku hwakaenzana)
Muchidzidzo cheTaranyika (Geography), mazuva eHusiku Hwakaenzana (Equinox) anoitika March 20-21 neSeptember 20-21. Pamazuva aya Denderedzwa reChiedza rinocheka North pole neSouth pole - mativi ose eAkiso anenge ari hhambwe dzakafanana kubva kuzuva - hapana divi rinenge riri pedyo nezuva kudarika rimwe. Zvakare hapana divi reAkiso rinenge rakanongedza kune zuva. Pamazuva aya nzvimbo dzose dziri Pasirose dzinowana husiku hwakaenzana, hwakareba 12 maawa - saka mazuva aya achinzi husiku hwakaenzana- equinox. Nokumwe kutaura tinokwanisa kuti masikujechetere kana masikumaenzane.
Kubva pana March 20-21, nguva yechiedza inoenda ichireba kuhafu yekuMaodzanyemba - kutanga kwenguva yeChirimo (spring) kunzvimbo dziri kuMaodzanyemba kweMutsazanisi. Kunzvimbo dziri kuChamhembe, nguva yechiedza inenge ichiderera, kutanga kwenguva yeMatsutso (autumn) kunzvimbo idzi.
Kubva pana Sep 20-21, nguva yechiedza inoenda ichiderera kuhafu yekuMaodzanyemba - iyi inguva yemwaka we[[Matsutso] (autumn) kunzvimbo dziri kuMaodzanyemba kweMuenzanisi. Kunzvimbo dziri kuChamhembe, nguva yechiedza inenge ichireba, nguva yemwaka weChirimo kunzvimbo idzi.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Husiku_Hwakaenzana&oldid=53249"
Last edited on 16 Zvita 2017, at 02:03
This page was last edited on 16 Zvita 2017, at 02:03.